I-China Fused Silica Yomkhiqizi Nomhlinzeki Wemboni Yezobuchwepheshe | I-Dinglong
I-silica yethu ehlanganisiwe ine-resistivity ephezulu kakhulu kagesi, ukunwetshwa kwe-volumetric ephansi kanye nokuhamba okuphansi kokushisa. Imvamisa isetshenziswa embonini ye-elekthronikhi njengokugcwalisa kumakhemikhali wokubumba epoxy ama-semi-conductor.
ukwehluleka okuphezulu kagesi, ukunwetshwa okuphansi kwevolumu kanye nokuqhuba okuphansi kokushisa
Izici ezinhle kakhulu zokufakwa kukagesi
Kutholakala ngezinhlobonhlobo zamasayizi wezinhlayiya ezijwayelekile, futhi kungenziwa ngezifiso kokucaciswa kwakho
I-silica yethu ehlanganisiwe ine-resistivity ephezulu kakhulu kagesi kanye ne-conductivity ephansi yokushisa, ngakho-ke isetshenziswa embonini ye-elekthronikhi njengokugcwalisa kumakhemikhali wokubumba epoxy ama-semi-conductor.
IDinglong ikhiqiza inqwaba yemikhiqizo ehlanganisiwe yesilika namabanga emikhiqizo ethile ukuze kuhlangatshezwane nazo zonke izidingo zomkhakha we-elekthronikhi. Sinikezela ngobumsulwa obuphakeme obuxubene nofulawa we-silica wezinhlobonhlobo zezicelo zokugcwalisa. Umklamo wethu wokuguqula isithando somlilo kanye nenqubo yethu kusiza ukuvimbela umkhiqizo we-silica ohlanganisiwe ukuthi ungcoliswe ngezinto ezingekho ze-silica kanye ne-crystalline-silica phase, okuholela kumkhiqizo we-silica owenziwe ngomuthi onobumsulwa bama-99.98%.
I-siling ehlanganisiwe ye-Dinglong iyatholakala kumamaki ahlukene kanye nosayizi ohlukahlukene wezinhlayiyana futhi nayo ingenziwa ngezifiso ekucacisweni kwakho. Imikhiqizo yethu ye-silica ehlanganisiwe ingalungiswa ngezidingo ezithile zohlelo lokusebenza futhi iyatholakala ngama-2,200 lbs. (1,000 kg) amasaka esikhwama.
Le silica efakiwe yomkhakha we-elekthronikhi yenziwa endaweni eqinisekisiwe eLianyungang, eChina. Ngeminyaka engama-30 yokusungulwa, uDinglong uzuze ukusekelwa okuqinile kwemishini nobuchwepheshe futhi waqongelela okuhlangenwe nakho okukhulu ngokukhiqiza izinto ezinhle ze-quartz. Izinqubo zethu zokukhiqiza zenzelwe ukuvumelana nokwethembeka - kusiza ukuqinisekisa ikhwalithi nomkhiqizo onokwethenjelwa. Sikholelwa ukuthi imikhiqizo ethembekile ingasisiza ukuthola ukuthengisa kobuholi futhi sakhe ukuthembana nobungani namakhasimende ethu.
Langaphambilini I-Silica Lump ehlanganisiwe
Olandelayo: I-Silica efakwe ku-Investment Casting